Valentinstag auf Somalisch - marlene-schachners Webseite!
Valentinstag auf Somalisch
Febraayo 14, 2021
01. Maalinta Jacaylka waa soo noqotay. Lamaanayaal badan ayaa maalinta jaceylka ugu dabaal degta qaab jaceyl qaar kale ayaa neceb Maalinta Jacaylka kuwa kalena waxay hor istaagaan lammaanahooda iyagoo ka xishoonaya maxaa yeelay waxay si fudud u iloobeen inay tahay waqtigaas. Si taasi aysan u dhicin - mana jiro wax dood ah maalinta jacaylka, wax walba - waxaan cadeyneynaa su'aalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan maalinta jacaylka.
02. Xaqiiqooyinka Maalinta Jacaylka: waa goorma?
Maalinta Jacaylka waxay dhacdaa 14-ka Febraayo sanad walba. Sannadkan maalinta jacaylku waxay ku beegantahay maalin jimce ah. Intooda badan, tani waxay ka dhigan tahay inaysan maalintii oo dhan la qaadan karin qofka ay jecel yihiin. Sababtoo ah Maalinta Jacaylka maaha fasax dadweyne oo jacaylku kuma filna shaqo bixiyeyaasha badankood sabab inay fasax u qaataan fasax
03. Maxaa lagu xusaa Maalinta Jacaylka?
Malaayiin lammaane oo adduunka ku nool ayaa u dabaaldega jacaylkooda Maalinta Jacaylka, is siiya ubaxyo, u soo baxa inay wax cunaan oo ay wada qaataan maalinta. Laakiin si dhib yar qofna ma oga sababta uu qof aad ugu daryeelo lammaanahiisa maalinta Jacaylka.
04. Asal ahaan, Maalinta Jacaylka waxay ahayd maalin kiniisad xusuus ah oo dib ugu noqotay mid ka mid ah Masiixiyiintii ugu horreeyay: Valentin von Terni. Saint Valentine waxay nooleyd qarnigii 3aad ee miilaadiga. Waqtigaas Masiixiyaddu ma ahayn oo keliya diin aad u yar oo ka jirtay Boqortooyada Roomaanka, sidoo kale waa la mamnuucay.
05. Sikastaba, Valentin wuxuu aaminay dadka jecel kuwa aaminsan diinta Masiixiga. Dhaqan ahaan, arooska ka dib wuxuu ubax siiyay lammaanaha, kuwaas oo uu ka soo xushay beertiisa. Xitaa askarta laga mamnuucay (la mamnuucay) inay guursadaan sharciga Rome ayaa la sheegay inay guursadeen Valentin.
06. Sheekada jacaylka ah, si kastaba ha noqotee, waxay ku heshay dhammaad lama filaan ah oo gebi ahaanba aan macquul ahayn Valentin von Terni. Valentin waa la xiray oo madaxa ayaa laga jaray 14-kii Febraayo, 269. Si sharaf leh, 14-ka Febraayo waxaa loo ilaaliyay maalin xus ah.
07. Xitaa haddii kaniisaddu ay amar siisay Valentin of Terni, jiritaankiisa dhab ahaantii way adag tahay in la caddeeyo taariikh ahaan waxaana lagu daboolay halyeey. Isla waqtigaas waxaa sidoo kale jiray Valentine of Rome, sidoo kale shahiid.
08. Waxay noqon kartaa inay ahayd laba Valentines oo kala duwan, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa hal iyo isku qof. Caddaynta taariikhiga ah ee aan la hubin waxay horseedday aragti u gaar ah: Maalinta Jacaylka waa ikhtiraac hanti-goosad.
09. Immisa lacag ah ayey Jarmalku ku bixiyaan hadiyadaha Maalinta Jacaylka?
Celcelis ahaan, Jarmalku waxay ku qaataan ku dhowaad 50 euro maalinta Jacaylka.
10. Maalinta Jacaylka sidoo kale ma laga xusaa dalal kale?
Maalinta Jacaylka adduunka oo dhan ayaa laga xusaa. Dalka Mareykanka, waa caado caan ku ah carruurta dhigata iskuulka iyo dhalinyarada inay ku raaxeystaan kaararka Valentine ee ay iyagu qoreen. Qiyaastii 190,000,000 milyan oo kaararka ayaa loo diraa Maalinta Jacaylka.
11. Haddii aadan haysan lammaane joogto ah, uma baahnid inaad murugo ku noolaato Great Britain. Sababtoo ah lamaanayaasha waxaa isku sawiray maalinta Jacaylka, oo markaa xoogaa fiiro gaar ah siiya. Sida laga soo xigtay waqtiga iyo taariikhda.com, Ingiriisku wuxuu ku bixiyaa qiyaastii 1.3 bilyan oo ginni sanadkii hadiyadaha Jacaylka.
12. Maalinta Jacaylka waa indho-qabad ku yaal Koonfur Afrika. Sababtoo ah dadku waxay u labistaan caddaan iyo casaan si ay u muujiyaan daahirnimo iyo jacayl.
13. Maalinta Jacaylka sidoo kale waxaa laga xusaa Aasiya, laakiin mararka qaarkood waa la xusaa
hab aan caadi ahayn. Dalka japan dumarka waxay ragga siiyaan shukulaatada madow maalinta jacaylka. Hal bil kadib, 14-kii Maarso, waxaa la joogaa ragga oo
re van chie ren leh shukulaatada cad.
14. Shiinaha, dhiggiisa Maalinta Jacaylka, xafladda Qixi, ma dhacdo Febraayo 14-keeda, laakiin fiidka maalinta toddobaad ee bisha toddobaad ayaa ku xusan jadwalka Shiinaha ee chin chin chan. Sannadkan waa 7-dii Ogos. Dalka Shiinaha, waa caado in dumarka dhallinta yar ay ku kulmaan xafladda Qixi si ay cirbadaha isugu duubaan. Miraha sidoo kale si farshaxanimo leh ayaa loo xardhay, tusaale ahaan haadda ama ubax.
15. Ma caadi baa in la neceb yahay Maalinta Jacaylka sidoo kale?
Haddii aadan jacayl kujirin hadda, Maalinta Jacaylka runti muhiim maaha. Laakiin xitaa lamaanayaal badan ayaan u maleyneynin inay u dabaal dagayaan 14-ka Febraayo maalinta jacaylka. Sannadkii 2015, boqolkiiba 40 dadka Jarmalka ah waxay sheegeen inay neceb yihiin maalintaas.
16. Xitaa waad u dabaaldegi kartaa maalinta jacaylka nacaybka. Xannaanada xayawaanka ee Ingiriiska ayaa bixisa inay ugu magac bixiso baranbarooyinka Maalinta Jacaylka kuwii ay hore u wada noolaayeen.
Lehrerin (Dienstag, 16 Februar 2021 03:44)